Gudiga Maaliyadda Baarlamanka oo ka qeybgalaya tababar aqoon kororsi ah (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Gudiga Maaliyadda Baarlamanka oo ka qeybgalaya tababar aqoon kororsi ah (Daawo Sawirada)
Gudiga Maaliyada Baarlamanka Soomaaliya ayaa ka qeybgalay furitaankii aqoon isweydarsi ku saabsan Sharciga Maaliyada & Maareynta Maaliyada qaranka oo lagu qabtay Magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Aqoon isweydaarsigasi oo socondoono mudo toban maalmood ah waxaa looga doodi doonaan Sharciga Maaliyada & Maareynta Maaliyada dalka iyadoo ay sidoo kale ka qeybgalayaan xubno ka socda wasaarada maaliyada iyo qubaro ka socda Bangiga aduunka iyo IMF.
Gudoomiyaha gudiga maaliyada baarlamanka soomaaliya Xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh daahir ayaa waxa uu warbaahinta qaranka uga warbixiyay aqoon iweydaarsigan iyo muhimada uu u leeyahay dowlada faderalka Soomaliya.
Xuseen siyaad caato oo la taliye ka ah wasaarada Maaliyada Xukuumada Soomaaliya isla markaana ka qeybgalaya tababarkaasi ayaa waxa uu sheegay in gudiga uu ka caawin doono Sharciga maamulka Lacagta.
Kaalmo la gaarsiiyay qaxootiga reer Yemen ee ku sugan Magaalada Muqdisho (Daawo Sawirada)
Amisom oo sheegtay Somaliya inaan lagu maxkamadeyn doonin 5 Askari oo Amisom ka tirsan oo falal xatooyo lagu qabtay